Vakapfuma Vatengi Vanoda Zvemagariro Vatengi Kutarisirwa | Martech Zone
Vakapfuma Vatengi Vanoda Zvemagariro Vatengi Kutarisirwa
Iyo yakakosha yemagariro midhiya yekushambadzira zano inofanirwa kusanganisira basa revatengi. Makambani mazhinji anosiyanisa maviri, asi vatengi vako havana chero kupatsanurwa kwakadaro. Paunenge uchinge wave munharaunda, ivo vanozoshandisa iyi chiteshi pamibvunzo, makomendi uye zvichemo. Nhau dzakanaka ndedzekuti iwe unogona kunyatso kuratidza nezve hunyanzvi hwekushandira vatengi mune veruzhinji, nekudaro Marketing unozviita sei nemazvo netarisiro.
Ndeapi makambani angangotadza kuziva kuti ndeevatengi vako vane akanyanya mabhajeti ayo sarudza kuchengetwa kwevanhu pamwe nebasa revatengi. Rega izvozvo zvinyure zvishoma…
Vanowana mari yepamusoro kunyanya vanoshandisa zvakanyanya masocial network kune vatengi. Makambani anotadza kushandisa izvo arikushaya mukana wekuvandudza zviitiko zvechigadzirwa uye kukura. McKinsey & Kambani
Makambani anofanirwa kuisa zano rebasa revatengi mumaitiro avo enhau enhau uye nzira dzinogadzirisa nyaya dzevashandi nekukurumidza sezvazvinogona. Kurega nyaya dzichidhonza kunoparadza masimba ako uye kuvimba kunodikanwa kushandura tarisiro kuva vatengi nevatengi kuva mafeni.
Tags: Mabatiro evatengivatengi infographicinfographicMcKinseyMcKinsey & Kambanikuchengetedza nzangakushamwaridzana nevatengipfuma
Kufuridzira kuri pamusoro peKutendeuka, Kwete Kusvika
Nhare Yekubhadhara Hacks yeBhizinesi